3 uzo ozo ka Photoshop maka Linux na otu esi etinye ha | Site na Linux
Photoshop bụ ihe njikwa ihe onyonyo na onye ndezi raster eserese nke Adobe mepụtara. Sọftụwia a bụ ọkọlọtọ maka ụlọ ọrụ foto. Agbanyeghị, ọ bụ ngwaahịa akwụ ụgwọ ma anaghị agba ọsọ na Linux.
Ọ bụ ezie na nyocha ọ nweghị ihe ọ bụla iji dochie ngwanrọ oge a anyị na-eweta ngwa atọ n'efu na-abịaru Photoshop nso na arụmọrụ ya.
Na mgbakwunye, ngwa atọ ndị a anyị ga-ewetara gị taa dị na Flatpak na Snap. Site na nke a, enwere ike ịwụnye ngwa ọ bụla na nkesa Linux ọ bụla dị ugbu a.
Na mgbakwunye, tupu ịmalite, ọ dị mkpa iji mesie ya ike na ọ dị mkpa na ị nwere nkwado maka snap p Flatpak na sistemụ gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye ngwa na usoro anyị na-eweta ebe a.
A makwaara ya dị ka Mmemme GNU Image Manipulation bụ otu n'ime ndị editọ ihe oyiyi kachasị mma dị na Linux, Windows na Mac, gbakwunyere na ọ bụ n'efu. GIMP dịkwa ochie dịka Photoshop n’ihe gbasara sọsọ sọftụwia ahụ dị n’ụlọ ọrụ ahụ.
GIMP na-arụsi ọrụ ike na mmepe na nhapụ ọ bụla ọhụụ na-enye usoro ndozi dị mma ịnọ n'usoro ụlọ ọrụ ahụ.
Agbanyeghi na otutu ihe omuma Photoshop adighi na GIMP, GIMP ka nwere ike dakọrịrị na ọrụ ya dịka o kwere mee na Photoshop.
GIMP kwadoro edemede, nke bụ akụkụ dị ike nke ngwa a.
GIMP dị ka Flatpak na Snap, ya mere maka ntinye ya na-agba ọsọ:
O ịwụnye site na Flatpak:
Es onye editọ eserese eserese maka ịdezi ihe atụ, logos na ihe osise dị mgbagwoju anya.
Ọ bụ ezie na ngwa a nke akacha eji mee ihe eserese svg, enwere ike iji ya dezie onyonyo ma nyere aka na ụfọdụ Photoshop arụmọrụ.
Atụmatụ ndị akwadoro gụnyere: ụdị, ọrịa strok, ederede, akara, clones, ngwakọta ọwa alfa, mgbanwe, gradients, usoro na otu ndị ọzọ.
Inkscape na-akwado metadata Creative Commons, nhazi ederede, akwa, arụmọrụ dị mgbagwoju anya na ọrịa strok, vectorization nke faịlụ eserese, ederede ederede, nhazi ederede, edezi XML kpọmkwem, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Can nwere ike mbubata formats dị ka Postcript, JPEG, PNG, na TIFF ma na-ebupụ PNG, yana ọtụtụ usoro eji agba agba.
Ebumnuche Inkscape bụ imepụta ngwa eserese dị ike ma dịkwa mma, na-agbaso ụkpụrụ XML, SVG, na CSS.
Iji wụnye ngwa a site na Snap ị ga-agba ọsọ iwu na-esote na ọnụ gị:
O iji wụnye si flatpak ị ga-agba ọsọ iwu a:
Nke a bụ ihe nhazi ederede na ngwa ọrụ ntanetịime foto Ezubere iji jikwaa foto. Tnwere ikike ijikwa foto na ụzọ na-enweghị mbibi maka mmepụta post.
Dị ka Photoshop nwere ike ijikwa ma dezie eserese raster na ngwa a bara uru n'ezie maka ndị na-ese foto na-edozi ọtụtụ foto maka arụmọrụ ha.
Na mgbakwunye na ya atụmatụ GPU accelerated image processing na ọtụtụ arụmọrụ onyonyo na-agba ọkụ ọkụ ngwa ngwa maka nkwado OpenCL (nchọpụta oge na enyemaka).
Ọchịchịrị nwere ike ibubata ọtụtụ ụdị ihe oyiyi dị iche iche, oke na oke di omimi (dika JPEG, CR2, NEF, HDR, PFM, RAF…).
Ọchịchịrị -eji ma sidecar XMP faịlụyana nchekwa data ya ngwa ngwa iji chekwaa metadata na nhazi nhazi.
A na-agụ ma dee Exif data niile site na iji libexiv2.
Iji wụnye ngwa a na sistemụ gị site na iji enyemaka nke Snap, ị ga-emezu iwu a:
O iji wụnye ngwugwu Flatpak ị ga-emerịrị iwu a:
Photoshop bụ ngwa dị ịtụnanya ma bụrụ ọkwa taa.
Agbanyeghị, ekwenyere m na ihe karịrị ngwa atọ nwere ike ịdị nso Photoshop ma rụọ ọrụ dị ka ndị ọrụ Linux.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » 3 uzo ozo ka Photoshop maka Linux na otu esi etinye ha
Darktable enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na Photoshop, kama ọ chọrọ ịbụ lightroom, inkscape ga-abụ onye na-ese foto, gimp yiri Photoshop.
Miss hapụ otu, Krita.
Inkscape enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na Photoshop, ọ bụ ngwa ngwa eserese, n'ọnọdụ ọ bụla ọ bụ ihe efu efu nke Corel Draw, mana ọ nweghị ihe ọ bụla metụtara Photoshop.
Zaghachi Marcelo Quirico
Iji ghara ikwughachi onwe m, aga m ekwu okwu banyere ihe ndị otu ibe m mere na mbụ, ana m agbakwunye na ịhụ na onye edemede nke isiokwu ahụ amaghị ihe ọ na-ekwu maka ya, ha kwesịrị ịgbanwe aha ahụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ idebe nke a isiokwu.
Inkscape? nchebe? ọ bụ ihe ọzọ na Ilustrator, Corel Draw, wdg.
Maka m ndepụta a ga - abụ, Gimp, Krita, Pixlr, Paint.net ... ọbụlagodi Imagemagik
Na mgbakwunye na Inkscape na darktable bụ ndị Photoshop enweghị atụ, ọ ga-amasị m ịkọwapụta na GIMP nwere atụmatụ na plugins nke ndị ọrụ Photoshop ga-achọrịrị, dị ka mgbapụta mmiri mmiri.
Zaghachi na pablocs
O di nwute, aghaghi m ikwenye n'uzo nile nke nkatọ emere na edemede a ya mere enweghi otutu itinye, ana m eme ka o doo anya na ihe nile dabere na ebumnuche:
- Gimp na-enyefe ihe nhazi ihe oyiyi nke ọma na ọkara.
- Nnukwu eserese dijitalụ na vektọ, Krita gbagwojuru Photoshop, mana ọ bụghị Corel Painter.
-Inkscape vector ịbịaru na-ewepụ gị nsogbu na ịmara otu esi eji ya nwere ike ịme ihe ịtụnanya. ma ọ dịghị ebe ọ bụla dị n’elu Illustrator ma ọ bụ Coreldraw.
Talibanism wezuga, ma ọ bụrụ na ihe adịghị emeghe, mgbe ahụ ekwughi ya, achọpụtara m na nnukwu nhọrọ maka eserese vektọ na nhazi atụmatụ ntanetị bụ GravitDesigner.
-N'ihi na eserese eserese na animation nke mgbakọ na mwepụ na jiometrị eserese enwere Geogebra
-N'ihi na mfe foto retouching e nwere ọtụtụ.
Inkscape na darktable ekwesịghị ịnọ na ndepụta ahụ n'agbanyeghị na darktable nwere ụfọdụ atụmatụ Photoshop mana ọchịchịrị dị mma na arụ ọrụ (nke mere ka ọ bụrụ ezigbo ngwaọrụ maka ndị na-ese foto).
Gimp na Krita bụ ndị na-asọ mpi nke Photoshop, ọbụlagodi krita bụ onye na-emeri ụfọdụ agha na ahịa azụmaahịa ma na-ewepụ ebe na-ewepu foto ma ọ bụ n'ọhịa nke ịdị mfe na kwa ụbọchị, gimp na-aga n'ihu na mmebi si foto.
Zaghachi Richard Gilbert